Big Data dia manosika ny marketing ho amin'ny ora tena izy | Martech Zone
Alakamisy 3 martsa 2016 Sabotsy, Janoary 14, 2017 Chris Hoyt
Ny mpivarotra dia nitady hatrany ny hahatratra ny mpanjifany tamin'ny fotoana mety - ary hanao izany alohan'ny mpifaninana aminy. Miaraka amin'ny fahatongavan'ny Internet sy ny fotoana tena izy Analytics, ny fihenan'ny fe-potoana ilaina ho an'ny mpanjifanao dia mihena. Big Data izao dia mahatonga ny marketing ho haingana kokoa, hamaly bebe kokoa ary ho an'ny tena manokana noho ny teo aloha. Ny habetsaky ny fampahalalana sy ny angovo momba ny informatika avy amin'ny rahona, izay miha mahazo vidy sy mora vidy, dia midika fa na ny orinasa kely aza dia afaka mamaly ny tsena amin'ny fotoana tena izy, mahafantatra ny filan'ny mpanjifan'izy ireo (angamba alohan'ny hanaovany izany), ary maminavina sy manantena fiovana.
Inona no atao hoe Marketing amin'ny fotoana tena izy?
Ny varotra amin'ny fotoana tena izy dia manondro ny fahafahany manatona ny mpanjifa amin'izao fotoana ilainy izao na hamaly ny hafatrao. Midika koa izany fa afaka miresaka amin'ny mpanjifanao ianao amin'ny toe-javatra misy anao izao. Ny varotra nentim-paharazana dia efa voalahatra mialoha mifototra amin'ny fomba fanao tsara indrindra, fizaran-taona na amin'ny fandaharam-potoanan'ny marika. Ny varotra amin'ny fotoana tena izy dia voalahatra ara-lojika mifototra amin'ny fihetsika, persona ary ny toerana misy ny mpandray lasibatra. Matetika koa natao ho azy manokana.
Nandritra ny Super Bowl 2013, rehefa maty ny herinaratra dia nanosika dokambarotra tao anatin'ny minitra vitsy i Oreo izay nilaza fa "Mbola afaka mivoaka amin'ny maizina ianao."
Ohatra mahafinaritra fotsiny izany. Mahery kokoa, Target dia afaka mampiasa fahazarana mividy hamantatra ny fiovan'ny fiainana sy manolotra fihenam-bidy mifandraika amin'ny mpanjifa, eny fa na dia somary mampatahotra aza (jereo ny lahatsoratra momba ny fahalalana Target rehefa bevohoka ny mpanjifa). Ary koa, ny mpivarotra an-tserasera, toa an'i Amazon, dia nianatra nieritreritra mialoha ny fotoana mety hamerenanao ny vokatra azo tratrarina izay mitarika tolotra fampahatsiahivana.
Amin'ny ambaratonga kely kokoa, ireo orinasa manafanana sy mangatsiaka izay afaka mampiasa ny angona taloha sy ny angon-drakitra momba ny toetr'andro mba haminavinana ny fangatahana dia afaka mitaky habetsabe kokoa noho ireo orinasa miandry fotsiny ny telefaonan'ny telefaona, satria manomana loharano mialoha ny fotoana izy ireo. Ny trano fisakafoanana dia afaka mampiasa lamina mividy haminazana karazana sakafo tian'ny mpanjifa amin'ny fotoana samihafa amin'ny taona. Tena tsy misy raharaham-barotra izay tsy mahazo tombony amin'ny fampiasana angona mba haminany, haminavina ary hivarotra ho an'ny mpanjifany amin'ny fotoana tena izy.
Ny hazakazaka iray
Ny marketing dia nentim-paharazana momba ny demografika sy ny stereotypes malalaka. Betsaka ny olona eto amin'izao tontolo izao, ny orinasa dia tsy mahatsapa ho afaka hahatratra olona amin'ny sehatra tsirairay. Amin'ny ankabeazany, ny olona dia nahatakatra sy niaritra ity toe-tsaina "tsena marobe" ity. Na izany aza, rehefa mitombo ny Big Data dia manomboka manantena ny hotsaboina isam-batan'olona ny olona.
Mety ho toa tsy mampaninona azy io, "Ahoana no ahafahan'ny angona bebe kokoa mampiavaka ny olona tsirairay?" Raha ny marina, izany no mahatonga ny Big Data ho mahery vaika. Ny fironana, ny fahazarana, ny safidinao ary ny fitondrantenan'ny tsirairay dia mora kokoa ny mamantatra sy mahatakatra rehefa manana angona misimisy kokoa ianao. Miaraka amin'ny angon-drakitra kely kokoa, dia mionona amin'ny salanisa rehetra isika. Miaraka amin'ny angon-drakitra misimisy kokoa, afaka manomboka mampifanaraka ny mampiavaka ny mpiaro antsika tsirairay isika.
Ao amin'ny tsena mifaninana, ny orinasa izay afaka mifanerasera amin'ny mpanjifa amin'ny sehatra iray namboarina manokana dia handresy ireo izay tsy mahita mihoatra ny "mpanjifa antonony." Mifaninana amin'ny hazakazaka iray isika.
EBook MAIMAIMPOANA "Marketing amin'ny hafainganam-pandehan'ny asa"
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny fanovan'ny Big Data ny marketing, sy ny fandinihana tranga mikasika ny fampiasan'ny mpivarotra, ny mpamokatra ary ny orinasa ara-pahasalamana izany angona izany mba hampanan-kery ny fivarotana azy ireo amin'ny fotoana tena izy, mitodiha any Perscio ary ampidino ny whitepaper maimaim-poana.
Ampidino ny marketing amin'ny hafainganam-pandehan'ny asa
Tags: lehibevarotra data lehibewhitepaper maimaim-poanamarketing amin'ny hafainganam-pandehan'ny asaoreoperscioamin'ny fotoana katrokaangona lehibe amin'ny fotoana tena izymarketing amin'ny fotoana tena izyTwitterWhitepaper